ဖြစ်တာတွေတော့ ဖြစ်ပြီးသွားပြီ……ကဲ..ဘာလုပ်ကြမလဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Opinions & Discussion » ဖြစ်တာတွေတော့ ဖြစ်ပြီးသွားပြီ……ကဲ..ဘာလုပ်ကြမလဲ
Posted by maungmoenyo on Sep 4, 2011 in Opinions & Discussion | 11 comments
investigators-rule-death-of-rebecca-zahau-a-suicide-family-unconvinced=8331မနေ့ကကယ်လီဖိုးနီးယားတောင်ပိုင်ကထုတ်ဝေတဲ့သတင်းစာအားလုံးလိုလိုနဲ့၊ အင်တာနက်တွေမှာ မြန်မာပြည်ဖွား (၃၂) အရွယ် Rebecca Zahau ရဲ့ ကြေကွဲပွဲရာဖြစ်ရပ်ဇာတ်သိမ်းလို့ဆိုရမလား အကြောင်းအကျယ်တ၀င့်ပါလာပါတယ်။ San Diego မြို့ Coronado မှာ အိပ်ခန်း (၂၇) ခန်းရှိတဲ့ သန်းပေါင်းမြောက်များစွာတန်ဘိုးရှိတဲ့ mansion ကြီးမှာမှာနေထိုင်တဲ့ Rebecca တယောက် ပြီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင်(၁၃) ရက်က ဇွဲကြိုးချသေဆုံးတဲ့ ဖြစ်ရပ်ကစတာပါ။ ရဲနှင့် သေမှုသေခင်းစစ်အားလုံးက မိမိကိုယ်ကိုသေကြောင်းကြံမှုအဖြစ်ကောက်ချက်ချလိုက်ပါပြီ။ Rebecca ရဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ Jonah Shacknai ဘက်ကပါလာတဲ့ Max ဆိုတဲ့ (၆)နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်အိမ်ကြီးကလှေကားပေါ်ကပြုတ်ကျပြီး၊ ဆေးရုံပေါ်မှာ အသည်းအသန်ကုသခဲ့ရပါတယ်။ အဲ့ဒီကလေးငယ်မကြာခင်အတွင်း သေဆုံးမှုဖြစ်ပြီး၊ နာရီပိုင်းအကြာမှာ အဲ့ဒီ MANSION ကြီးရဲ့ ရှေ့မျက်နှာစာမှာ အကျည်တန်စွာနဲ့ ဇွဲကြိုးချခဲ့တာကိုတွေ့ကြရပါတယ်။ မသေမှီနာရီပိုင်းအလိုက သူ့မရဲ့ ဖုံးမှာ Max တယောက်သေဆုံးမှုနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး အတော်စိတ်ထိခိုက်ရကြောင်းဆွေမျိုးနီးစပ်များကပြောကြပါတယ်။ သူမနဲ့ ကလေးငယ်တို့ရဲ့သေဆုံးမှုနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး၊ အဲ့ဒီဒေသတ၀ိုက်မှာ ထုံးစံအတိုင်းကောဠာဟလမျိုးစုံ ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ သန်းကြွယ်သူဌေး ဆေးဝါးကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် ရဲ့မိသားစု ရဲ့ဖြစ်ရပ်မို့ အများကလည်းစိတ်ဝင်ကြပါတယ်။ အင်တာနက်နဲ့သတင်းရပ်ကွက်တွေမှာ ခံစားမှုအမျိုးမျိုး၊ အမြင်အမျိုးမျိုးထင်ဟပ်ဖေါ်ပြကြပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့မြန်မာများထဲက media မှာ ဘာမှအကြောင်းဆွေးနွေးခြင်းအလျင်းမတွေ့ရသေးပါဘူး။ ဒီသတင်းနဲ့ပါတ်သက်ပြီးထူးထူးခြားခြား အောက်ပါမှတ်ချက်တခုကိုတွေ့ရပါတယ်…
Rebecca Zahau Nalepa had borderline personality disorder. She had problems holding down jobs. She was arrested for shoplifting in Arizona in 2009. (www.etidbits.com)
ဒါတွေကိုကြည့်ရင် ကျွန်တော်တို့မြန်မာများ ကကိုယ့်အချင်းချင်း ယိုင်းပင်းကူညီ ဖေးမမှုမှာ အလွန်အားနည်းနေသေးကြောင်း တွေ့ရပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး MG အဖွဲ့သားများရဲ့ လက်တွေ့ကျတဲ့ ထင်မြင်ယူဆချက်တွေ၊ နောက်ဆက်တွဲသတင်းများကို ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ မိမိအမြင်ဆိုရာမှာ အဓိက ကတော့ လူမှုရေး။ လူမျိုးရေး၊ တိုင်းရင်းသားရေး၊ ဘာသာရေး စသည်ဖြင့်ရှုဒေါင့်စုံပါကြမှာပါ။
ဒီလိုအဖြစ်အပါအ၀င် ပြည်ပရောက် မြန်မာနှယ်ဖွားတွေကြားထဲမှာ ဖြစ်လေ့များတဲ့ မကောင်းသတင်း (ကောင်းသတင်းကားပြန့်နှံ့ရန်ခက်ခဲလေစွ) ကိုဘယ်လို ဖြေရှင်းကူညီကြမလဲ၊ ဘယ်လိုဝိုင်းဝန်းကြမလဲ၊ အင်အားကြီးမားတဲ့ media မှာဘယ်လိုပါဝင်ကြမလဲ ဆိုတဲ့အခန်းကဏ္ဍကို ခုကတည်းကပြင်ဆင်ကြဘို့လိုပါတယ်။ စည်းလုံးကြဘို့ပါဘဲ။
ဖြစ်တာတွေလဲ ဖြစ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ ဘာမှတော့ လုပ်လို့ မရတော့ဘူးဗျ
နောက်လူတွေဒါမျိုး ထပ်မဖြစ်အောင်ပဲ သတိချပ်ဖို့ လိုတယ်
ထစ်ခနဲ ဖြစ်တာနဲ့ ..ဒီလိုမျိုးမလုပ်ကြပါနဲ့ ..လို့ ပဲ ပြောချင်ပါတယ်
ဒီလိုလုပ်ခဲ့တဲ့လူတွေကိုလဲ ကျနော် ပြင်းပြင်းထန်ထန် ရှုတ်ချပါတယ်
ဒီအကြောင်း ပြည်တွင်း မီဒီယာတွေမှာ မဖော်ပြတာကတော့ ရှင်းပါတယ်..
သူတို့မသိလို့ ပါပဲ..
ကျနော်တို့ လဲ မသိပါဘူး
ခုလို တင်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
အဖြစ်အပျက်ရဲ့နောက်ကွယ်မှာ ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ အမှန်တရားတွေ အများကြီးပုံရပါတယ်။ အဲ့ဒီအမှန်တရားဟာ ဘယ်တော့မှထွက်လာမဲ့ ပုံမပေါ်ပါဘူး။ privacy လို့ခေါ်တဲ့ မိမကိုယ်ရေးးကိစ္စကိုအလေးထားတန်းဘိုးပြုတဲ့ ဒီလိုအနောက်နိုင်ငံတွေမှာ၊ အဲ့ဒီအတားအဆီးဟာ ကောင်းတာတွေရှိသလို။ မကောင်းတဲ့အချက်တွေလဲရှိနေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဘွင်းဘွင်းပြောတတ်တွေးတတ်တဲ့ Asian တွေအတွက် အလွန်အခက်အခဲရှိပါတယ်။ စိတ်မကောင်းစရာအဖြစ်ဆိုတာထက် အဲ့ဒိက သင်္ခန်းစာဘယ်လိုယူမလဲ၊ ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေ အနေနဲ့ ဘယ်လို အခန်းကဏ္ဍက ပါဝင်သင့်သလဲဆိုတာပါဘဲ။
“”Rebecca Zahau Nalepa had borderline personality disorder. She had problems holding down jobs. She was arrested for shoplifting in Arizona in 2009. (www.etidbits.com)””
media တွေအားလုံး က Rebecca ဟာ ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းသူတစ်ဦးလို့ ညွှန်ပြနေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီ comment လေးတခုဟာ မြန်မာဆိုတဲ့ နိုင်ငံသားတွေအကြောင်း “၀”တလုံးမသိတဲ့ လူမျိုးခြားတွေအတွက် အထင်သေးစရာအဖြစ်တမဟုတ်ချင်းပြောင်းသွားနိုင်ပါတယ်။
“arrested for shoplifting”
It’s too bad, but, it was already done & no way we can correct it.
I think, it’s not too bad, as everybody has their own way or style of mental disorder.
The difference is more or less only.
“ကျွန်တော်တို့မြန်မာများ ကကိုယ့်အချင်းချင်း ယိုင်းပင်းကူညီ ဖေးမမှုမှာ အလွန်အားနည်းနေသေးကြောင်း တွေ့ရပါတယ်”
“မိမိအမြင်ဆိုရာမှာ အဓိက ကတော့ လူမှုရေး။ လူမျိုးရေး၊ တိုင်းရင်းသားရေး၊ ဘာသာရေး စသည်ဖြင့်”
I hate the habits of Myanmar ( jealousy, gossip, rumour ).
That’s why, I rarely participate in Myanmar Community.
I think Myanmar are poor mainly because of jealousy.
((((မြန်မာများထဲက media မှာ ဘာမှအကြောင်းဆွေးနွေးခြင်းအလျင်းမတွေ့ရသေးပါဘူး။ )))) ဆိုတာကတော့ … အကျိုးမြတ် အခွင့်လမ်း မရနိုင်ဘူးထင်တာရယ် … ၊လက်လှမ်းမမှီလို့ရယ်လို့ .. ထင်ပါတယ် …။
သိတဲ့အတိုင်း ဒီနိုင်ငံက မီဒီယာအများစုက လူစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်မယ် ထင်တဲ့..ကိစ္စတွေကိုပဲ ရေးကြတယ် … ဘယ်စလက်ဘရက်တီ ကလေးမွေးတယ် ၊ ဘယ်သူတော့ အိမ်ထောင်ပြုသွားပြီ စသဖြင့် ပေ့ါလေ …. ။
အ ခုလိုမျိုး သေမှူသေခင်းဆိုင်ရာ သတင်းနဲ့ ဆက်စပ်တွေးတော ကြည့်ခြင်းဆိုတာတွေကတော့ … နည်းနည်းလေး အလှမ်းဝေးသွားပြီထင်ပါရဲ့ … ။ နောက်တစ်ခုက ပြည်ပနိုင်ငံမှာ ဖြစ်တာဆိုတော့ ပိုဆိုးသေးတယ် … ပြည်တွင်းမှာ ဖြစ်တာတောင် မှူခင်း သတင်းဂျာနယ်လိုမျိုးမှာ တချို့အမှူတွေ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မဖော်ပြတာရှိတယ် …အခုလို ပြည်ပနိုင်ငံမှာ ဖြစ်တဲ့ သေမှူ သေခင်းကို ဖော်ပြဖို့ဆိုလျှင် … သူနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ရာဇ၀င်လေးလည်း နည်းနည်း လှန်ပြမှ ဖြစ်မယ်လေ … ။ ဒါတောင် လူက စိတ်ဝင်စားဦးမှ ဆိုတော့ … ဂျာနယ် ဈေးကွက်ထဲ အရာင်းသွက်ဖို့ကိုပဲ ဦးစားပေး ဖော်ပြနေကြတာပါပဲ …
အပေါ်ကလင်ခ်၂ခုမှာကြည့်ပါဦး.. အဲဒီအကြောင်း ရေးထားဖူးပါတယ်.။
မီဒီယာအနေနဲ့.. ၀င်ပြီးရပ်ပေးချင်မိပါရဲ့..။ မီလီယံနာ..ဆယ်လီဘရိတ်တီအတွင်းရေးဖြစ်နေတော့ကာ.. ကိုယ့်မှာ.. မြန်မာပရိဿတ်အင်အားမကောင်းပဲ..၀င်လိုက်ရင်..ကြားညှပ်သွားမှာလည်းကြောက်ရသေး..။
မနေ့တနေ့ကပဲ.. သတင်းတခုတက်လာတာမှာ.. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်..သတ်သေတာဆိုပဲ..။
မြန်မာပြည်ပေါက်တယောက်ဟာ.. ကိုယ့်ခြေလက်တွေကြိုးတုတ်.. ကိုယ်တုံးလုံးချွတ်.. ဆွဲကြိုးချသတ်သေဖို့.. ဘယ်လိုမှ လက်ခံလို့မရပါ..။
အမေရိကားေ၇ာက်.. မြန်မာဇာတိနွယ်တွေကိုယ်တိုင်က..မိမိတို့ မြန်မာပါလို့.. ကြေညာဝန်မခံတဲ့.. အသိုင်းအ၀ိုင်းကြားထဲ.. မီဒီယာအနေနဲ့.. ဒီလိုကိစ္စတွေကြေားဝင်တင်ပြဖြေရှင်းဖို့.. တော်တော်အဆင့်ကျော်နေသေးတယ်ထင်မိတာပဲ..။
မောင်မိုးညိုက ဒီလိုတွေးမိပါတယ်။ အမေရိကားရောက်မြန်မာ first generation ဟာ ဒီနိုင်ငံရဲ့ ကွာခြားလှတဲ့ ယဉ်ကျေးမှု၊ ဓလေ့ထုံးစံ နဲ့ လူနေမှုစနစ်ကို အလိုက်သင့်အောင်၊ အလုပ်မှာဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကျောင်းမှာဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ လူကြားထဲဘဲဖြစ်ဖြစ် ခတောင်းကြိုက်ပြီး ခါးစည်းခံ ကြိုးစားရုန်းကန် ကြရပါတယ်။ နားမလည်မှု၊ မသိမှု ပေါင်းမြောက်များစွာ စသည်တို့ရဲ့ ၀ဲသြဂထဲမှာ မျက်ရေကြီးငယ်ကျရတာမျိုးတွေ၊ ကြိတ်ပြီးမျက်ရေကိုဒူးနဲ့ သုတ်ကြရတာတွေချည့်ပါဘဲ။ မဟုတ်ဘူဆိုရင်ညာတာပါ။ ဒါမှမဟုတ်ရင် ကာလရွေ့လျော လို့ ဘ၀မေ့ အောက်ချေလွတ်ကြတာပါ။
ဒါပေမဲ့ သူတို့ကပေါက်ဖွားလာတဲ့ သားသမီးများဟာ (ပင်ကိုယ်က ညဏ်ရည်ထက်မြက်မှုရှိတဲ့ Asians) တွေဖြစ်တာမို့၊ မိမိတို့နေထိုင်တဲ့ လူများစွာ ကျပ်ညပ်နေထိုင်တဲ့ apartment ထဲကနေ ဆရာဝန်များ၊ အင်ဂျင်နီယာများ၊ corporate lawyer များဖြစ်ရုံမက၊ အစိုးရဌာနကြီးတွေ၊ လုပ်ငန်းကြီးတွေမှာ၊ တမဟုတ်ချင်း နေရာကောင်း၊ ရာထူးကောင်းတွေ ရလို့ အိမ်ကောင်း ယာကောင်း တွေ ဖြစ်သွားကြပါတယ်။ immigrantမိသားစုတစုရဲ့ ဆယ်စုနှစ်တခုအတွင်းဖြစ်ထွန်းလာတဲ့ အသီးအပွင့်တွေပါ။ ဒါနဲ့ အတူ မလိုလားအပ်တဲ့ ကိုယ့်ဘ၀ကိုကိုယ်မေ့တဲ့ အဖြစ်တွေပါဒွန်တွဲပါလာပါတယ်။ အဖေလုပ်တဲ့သူက ပလပ်စတိပ် ရေဗူးသန့်ကိုလိုက်စုဆောင်းရင်၊ အမေလုပ်တဲ့သူက ကိုယ်ကျွမ်းကျင်ရာလိမ်မာရာ ဗမာဟင်းလျာများ ချက်ပြုတ်ပြီး လပေးစနစ်နဲ့ ရောင်းချရင်း၊ ဓါတ်ဆီဆိုင် နဲ့ WALMART လိုနေရာမျိုးမှာ အလုပ်(၂)ခုခွလုပ်ရင်း၊ စက်ရုံမှာ အာရှသားအချင်းချင်းတောင်အနှိမ်ခံ အောက်ကျို့ပြီး လုပ်ကိုင်ကြရင်း၊ ကိုယ်က မွေးလာတဲ့ သားသမီးလုပ်သူတွေက သောက်ရေသန့်ဗူးအသစ်ဂျပ်ဂျွပ် တလုံးကိုတောင် ကုန်အောင်မသောက်ဘဲ ပက်ကနဲဖြစ်လိုက်တဲ့ အဖြစ်တွေ မြင်ရတော့ ပလပ်စတစ်ဗူးစုတဲ့ အဖေ ခမျာမှာ ရင်ကျိုးရရှာပါတယ်။ သူလေးတွေ က ဆရာဝန်ဖြစ်နေမှကိုး၊ သူလေးတွေက ဘဏ်ကြီးတခုမှာ vice-president ကြီးဖြစ်နေမှကိုး။
ဖေါ်ပြခဲ့တဲ့ အသေးအမွှားကိစ္စတွေကစပြီး၊ ဒီလို ပိုးစိုးပက်စက်အဖြစ်ဆိုးတွေအထိ ဘာ့ကြောင့်ဖြစ်ရတာပါလဲ။ မိဘတွေ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးကြည့်ပါ။ မောင်မိုးညို ကိုယ်တိုင်လည်းသားသမီးရင့်မကြီးတွေ နဲ့ ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေအတွက် အဖြေကို မီးထွန်းရှာနေရချိန်ပါ။
ဆိုလိုတာက သူဌေးမှ မဟုတ်ပါဘူး၊ သူဆင်းရဲမှမဟုတ်ပါဘူး။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၇ ခုနှစ်ကရောက်လာတဲ့ ပြောင်းခိုသူ က၇င်တိုင်းရင်းသား refugee ထဲ က ကလေးမလေးတယောက်ဟာ ခုချိန်မှာ ဘာသာစုံ honors classes တွေ ယူလို့ သူတို့မိသားစု သက်တမ်း(၁၀) မပြည့်ခင်မှာဘဲ အဲ့ဒိကလေးဟာ UCLA ရောက်ပြီးမကြာခင်မှာဘဲ pre-med မတက်နိုင်ဘူးလို့မပြောနိုင်တော့ပါဘူး။
တိုးတက်မှုက လက်တကမ်းအတွင်းမှာပါ…ဒါပေမဲ့ ဒွန်တွဲပါလာမဲ့မနှစ်မြို့စရာ၊ ရင်ကျိုးစရာဖြစ်ရပ်တွေ အတွက်အဖြေရှိကြပြီလား။ အဖြေရှိအောင်ကော ကျိုးစားနေကြပြီလား…။ သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ကြည့်ချင်ပါတယ်….မထင်။
Rebecca ရဲ့ မိဘတွေ ဟာခုစာဖတ်သူတွေနဲ့အတူသူလိုကိုယ်လိုပါဘဲ။ နှာတဖျားလောက်ကွာရင်ကွာမှာပေါ့။ ဒါပေမဲ့..ဟောကြည့်..ဖြစ်ရပုံက…။
အာရိုရို.. သူ့ဘဲကြီးက အတော်ချမ်းသာသဗျ၊ အခင်းဖြစ်ပွားရာ ရေပြင်ရှုခင်းနဲ့ အခန်း၂၇ခန်းပါ အိမ်ကျယ်ကြီးဟာ ၂၀၀၇ခုနှစ် တန်ဖိုးဒေါ်လာ ၁၂.၇၅သန်းတန်သည်။ သူ့ဘဲကြီး Jonah Shacknai က မျက်နှာပေါင်းတင် အလှပြင်တဲ့ဆေးကုမ္မဏီပိုင်တည်ထောင်သူ၊ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ ဥက္ကဌနဲ့ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် ဖြစ်ပြီး ၁၉၉၈ ဝင်ငွေခွန် ကြေငြာလွှာမှာ ဒေါ်လာ ၁၇သန်း ဝင်ငွေရှိတယ်။ မနှစ်က သူ့ကုမ္မဏီဆေးအရောင်း ဒေါ်လာသန်း၇၀၀ ဖြစ်ပြီး အမြတ်ငွေ ဒေါ်လာ၁၂၃သန်းရှိတယ်။ Rebecca Zahau ၃၂နှစ် မသေခင် နှစ်ရက်မှာ သူ့ဘဲကြီး အိမ်ထောင်ဟောင်းနဲ့ရတဲ့ သားလေး ၆နှစ်သား အိမ်လှေခါးပေါ်ကနေ ပြုကျသေဆုံးသွားတယ်။ အဲဒီခလေးကို သူပြုစုစောင့်ရှောက်နေတာ။ အရင်ခထဲက သူ့ဘဲကြီရဲ့ ခလေးတွေနဲ့ အဆင်မပြေကြောင်း ရင်ဖွင့်ထားတာတွေရှိတယ်။ မသေခင် ညမှာတင် အမလုပ်သူနဲ့ ဖုံးပြောတဲ့ မှတ်တမ်းမှာ သေစကား တခွန်းမှမပါဘူး။ သေသွားတဲ့ ခလေးအတွက် မနက်စာ ပို့ပေးဖို့၊ အဝတ်အစားလဲပေးဖို့၊ ဆေးရုံသွားပြပေးဖို့သာပါတယ်။ ဆေးရုံသွားရင်းနဲ့ မိဘတွေကို ဖုံးခေါ်မယ်လို့လည်း ပြောထားတယ်။
ဂျာမနီမှာနေတဲ့ နောက်အမတယေက်ကိုလည်း နောက်နေ့လုပ်မဲ့ အစီအစဉ်တွေကို update လုပ်ထားပေးမယ်လို့ အီးမေးလ်ပို့ထားတယ်။
Watch Dr. Phil Monday, November 14 at 3PM on CBS 8
First installment ofatwo part special on the mysterious death of Rebecca Zahau.